May Nyane: အချစ်ဆိုတာ....
အချစ်အကြောင်း အတွေ့ အကြုံတွေ ဖတ်သွားပါတယ် ဆရာမ။
အမျိုးသမီးတွေ မှာ အချစ်က အသက် ၄၀ မှာလဲ ရှိနိုင်သေးတယ်
ဆိုတာ လက်ခံ လား..ဟင်..
လက်တွေ့ဘ၀ထဲက ထွက်လာတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကသာ အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့ မနော်ရေ..။ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ဘ၀အတွက် တခုခုကို အကျိုးရှိအောင် ဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်ဖို့သာပဲ..နော်။
ကောင်းကင်ကိုရေ.. တတ်သလောက်လေး ရေးရတာပဲ :)
Steve ရေ..အဲဒါကလည်း ဘ၀နဲ့ရင်းပြီးမှ ရတဲ့အဖြေ။
mama... အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားပါ အသက်ရှိနေသေးသရွေ့ အချစ်ဆိုတာ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ကျမ ယုံတယ်။
ဘ၀ထဲ တော်တော် လူးလိမ့်ပြိုလဲခဲ့ရပြီးမှ ရလာတဲ့ အသိပါပဲ။
အချစ်ကိုတော့ အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြတာပါပဲ။
ဘာကြီးမှန်းတော့ မသိဘူး။ ပုံသေ ကားချပ် မရှိသလိုပဲ။
လူတယောက်တည်းကိုပဲ ငယ်ငယ်ကချစ်တာနဲ့ ကြီးလာမှ ချစ်တာတောင် မတူပြန်ဘူး။
အချစ်မှာ ဆရာမပြောတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်မှု၊ ငဲ့ညှာမှုတွေ ပေါင်းမှ ပိုလှတာတော့ အမှန်ပဲ။
တသတ်လုံးလက်တွဲသွားခဲ့တဲ့သူတွေကော၊ တလျောက်လုံး ချစ်သွားနိုင်ခဲ့ကြရဲ့လားလို့ တခါတရံမှာ ကျနော်မေးခွန်းထုတ်ချင်မိပါတယ်။
သေချာတာကတော့ အချစ်အကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင် ရိုးသားဖို့နဲ့ မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောရဲဖို့ပါပဲ။
အချစ်အကြောင်းပြောဖို့ထက် ချစ်တတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရင် ကျနော်မှားလား။
အချစ်'ဆိုတာ ကလည်း တခါတလေ ကုသိုလ်ကံနဲ့များ တွဲလာလေသလားပေါ့။
ဟုတ်တာပေါ့.. ကိုဝေလင်းရေ.. တသက်လုံးတကယ်ချစ်မသွားနိုင်ကြရင်တောင် မေတ္တာတရားနဲ့ ယှဉ်ဖို့.. အမုန်းမဖြစ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ချစ်သွားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ချိုသင်းပြောသလို လူတယောက်တည်းကိုတောင် အရွယ်ကြောင့် ချစ်တာမတူဘူးဆိုသလို..။
အင်းး မြတ်နိုးရေ.. တို့ကတော့ ကံတရားဆိုတာကို ယုံတယ်.. :)
ကလေးထိန်းခြင်း အနုပညာ ဖလှယ်မလား :P
Women in their 40s have active love and sex. I mean its for normal women.
မ ရေ… မ ရဲ့ အချစ်အကြောင်းက ၀တ္ထုတပုဒ်ထက် ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်… အသက်အရွယ် အတွေ့ အကြုံအရ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အချစ်ရဲ့အနက်တွေထဲ နောက်ဆုံးပိတ်အနက်လေးက ပိုပြီးပြည့်စုံသွားသလားလို့ … ပိုလေးနက်သွားသလားလို့ ( သေသေချာချာ စိတ်ပါဝင်စားဖို့.. ကိုယ်ချင်းစာငဲ့ညှာဖို့.. စိတ်ရှည်သည်းခံဖို့)… မ ရေ… တယောက်နဲ့ တယောက် သေသေချာချာ စိတ်ပါဝင်စားပြီး ကိုယ်ချင်းစာငဲ့ညှာလို့ .. စိတ်ရှည်သည်းခံရင်း ဘ၀ခရီးကို အတူလျှောက်နေခွင့်ရတဲ့ မ လောက် ကံကောင်းတာ ရှိနိုင်ဦးမလား… (အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတဲ့ကြားက ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မ ရယ်… ဟိုး အရင်က ကိုယ်ချစ်တဲ့ စာရေးဆရာမတယောက်ကို ကိုယ်ဖတ်ချင်တာလေး အဲလို ပူဆာလို့ ရတယ် ဆိုတာ အိပ်မက်တောင် မမက်ရဲခဲ့တဲ့အဖြစ်… ခုဆို သိပ်ပျော်တာပဲ)
ခုထိတော့ ကံကောင်းတဲ့ ဘ၀လေးတခုဆိုပါတော့။ အဲဒီအတွက် ကိုယ့်အဖော်ကို ကျေးဇူးတင်ရတာလည်း အမှန်ပါပဲ..။ နောက်ပြီးတော့ .. အဲလို ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေက ပူဆာတာလေးတွေ..၊ Tag တာလေးတွေကို ပြန်ရေးရတာလေးတွေကပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘလော့ယဉ်ကျေးမှုနော်..။ အဲဒီဘလော့လေးတွေကြောင့်ပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေ ဆုံရတာ.. သိပ်ကို ကြည်နူးစရာပါ..။